The Negotiator (1998) | MM Movie Store
ဒနျနီ ရိုမနျ (Samuel L. Jackson) ဆိုတဲ့ ရဲအရာရှိတဈယောကျဟာ ခြီကာဂို ရဲဌာနမှာ Negotiator လုပျရတဲ့ ရဲတဈယောကျပေါ့….Negotiator ဆိုတာ မွနျမာလိုဆိုရငျ စစေ့ပျညှိနှိုငျးဆှေးနှေးသူပေါ့ ….
သူ့ရဲ့ အဓိကတာဝနျကတော့ပွနျပေးဆှဲအမှုတှေ ဓားစာခံအမှုတှမှော သူက ဓားစာခံတှေ မထိခိုကျအောငျ အနာတရ အသအေပြောကျမရှိအောငျပွနျပေးသမားနဲ့ စကားပွောပေးရတဲ့သူပေါ့…
သူပွောတဲ့စကားတဈခှနျးဟာ ပွနျပေးသမားရဲ့ စိတျအခွအေနကေို အဆိုးဘကျကိုအနညျးငယျရောကျစရေုံနဲ့ ဓားစာခံရဲ့ အသကျအခြိနျမရှေးပြောကျသှားနိုငျသလို အခွားမလိုလားအပျတဲ့ ပွသနာတှလေညျး ရှိနိုငျပါတယျ….
ဒနျနီရိုမနျကတော့ ပွနျပေးသမားကို သိမျးသှငျးပွီး ဖွရှေငျးတဲ့အပိုငျးမှာ အထူးကြှမျးကငျြသလိုရုပျမွငျသံကွားမှာလညျး မကွာခဏ ခြီးကြူးဖျောပွခံနရေတဲ့ သူပေါ့……လုပျဖျောကိုငျဘကျတှကေလညျး သူ့အပျေါလေးစားကွတယျ….တဈနတေ့ော့ ရဲဌာနထဲမှာ ရံပုံငှတှေကေို ဒျေါလာသနျးနဲ့ ခြီပွီး အလှဲသုံးစားလုပျတဲ့ အမှုတဈခု ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ……
ဒီကိစ်စကို ကံဆိုးခငျြတော့ ဒီအမှုကို ဒနျနီရိုမနျ လုပျတယျဆိုပွီး ထောငျခြောကျဆငျခံလိုကျရတယျ…ဒီထောငျခြောကျဆငျမှုကွောငျ့ လုပျဖျောကိုငျဘကျတှရေဲ့ရှံ့မုနျးတဲအကွညျ့တှရေခဲ့တဲ့အပွငျ မီဒီယာတှရေဲ့ခေါငျးစဉျတှမှောလညျးအကငျြ့ပကျြခွစားတဲ့ရှံစရာအကောငျးဆုံး လူသားအဖွဈအဖျောပွခံလိုကျရတယျ…
ဒနျနီရိုမနျအတှကျတကယျ့ကို ကမ်ဘာပကျြတဲ့အခိုကျအတနျ့ပါပဲ….ကိုငျး ဒီအမှုကွီးကို ကို ဒနျနီရိုမနျတဈယောကျဘယျလိုရုနျးထှကျမလဲခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး….ဒီကားကတော့ ပွသခြိနျ ၂ နာရီခှဲနီးပါးရှိပမေယျ့ အစအဆုံးဆှဲဆောငျမှုရှိသလို Twist တှေ မထငျမှတျတဲ့ရှုထောငျ့တှနေဲ့တကယျ့ကိုဆှဲဆောငျမှုရှိပါတယျ..
အဓိက မငျးသား(၂)လကျဖွဈတဲ့ Samuel L. Jackson ကွီးနဲ့ Kevin Spacey တို့ပါဝငျလတေော့အထူးကိုပွောစရာမလိုတော့ပါဘူး..ကိုငျးမှုခငျး ၊အကျရှငျကားကောငျးတှကွေိုကျတဲ့သူတှအေဖို့ လကျမလှတျသငျ့ပါကွောငျးသတငျးကောငျးပါးပါရစေ…
ဒန်နီ ရိုမန် (Samuel L. Jackson) ဆိုတဲ့ ရဲအရာရှိတစ်ယောက်ဟာ ချီကာဂို ရဲဌာနမှာ Negotiator လုပ်ရတဲ့ ရဲတစ်ယောက်ပေါ့….Negotiator ဆိုတာ မြန်မာလိုဆိုရင် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသူပေါ့ ….
သူ့ရဲ့ အဓိကတာဝန်ကတော့ပြန်ပေးဆွဲအမှုတွေ ဓားစာခံအမှုတွေမှာ သူက ဓားစာခံတွေ မထိခိုက်အောင် အနာတရ အသေအပျောက်မရှိအောင်ပြန်ပေးသမားနဲ့ စကားပြောပေးရတဲ့သူပေါ့…
သူပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းဟာ ပြန်ပေးသမားရဲ့ စိတ်အခြေအနေကို အဆိုးဘက်ကိုအနည်းငယ်ရောက်စေရုံနဲ့ ဓားစာခံရဲ့ အသက်အချိန်မရွေးပျောက်သွားနိုင်သလို အခြားမလိုလားအပ်တဲ့ ပြသနာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်….
ဒန်နီရိုမန်ကတော့ ပြန်ပေးသမားကို သိမ်းသွင်းပြီး ဖြေရှင်းတဲ့အပိုင်းမှာ အထူးကျွမ်းကျင်သလိုရုပ်မြင်သံကြားမှာလည်း မကြာခဏ ချီးကျူးဖော်ပြခံနေရတဲ့ သူပေါ့……လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကလည်း သူ့အပေါ်လေးစားကြတယ်….တစ်နေ့တော့ ရဲဌာနထဲမှာ ရံပုံငွေတွေကို ဒေါ်လာသန်းနဲ့ ချီပြီး အလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ အမှုတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်……
ဒီကိစ္စကို ကံဆိုးချင်တော့ ဒီအမှုကို ဒန်နီရိုမန် လုပ်တယ်ဆိုပြီး ထောင်ချောက်ဆင်ခံလိုက်ရတယ်…ဒီထောင်ချောက်ဆင်မှုကြောင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေရဲ့ရွံ့မုန်းတဲအကြည့်တွေရခဲ့တဲ့အပြင် မီဒီယာတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေမှာလည်းအကျင့်ပျက်ခြစားတဲ့ရွံစရာအကောင်းဆုံး လူသားအဖြစ်အဖော်ပြခံလိုက်ရတယ်…
ဒန်နီရိုမန်အတွက်တကယ့်ကို ကမ္ဘာပျက်တဲ့အခိုက်အတန့်ပါပဲ….ကိုင်း ဒီအမှုကြီးကို ကို ဒန်နီရိုမန်တစ်ယောက်ဘယ်လိုရုန်းထွက်မလဲခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး….ဒီကားကတော့ ပြသချိန် ၂ နာရီခွဲနီးပါးရှိပေမယ့် အစအဆုံးဆွဲဆောင်မှုရှိသလို Twist တွေ မထင်မှတ်တဲ့ရှုထောင့်တွေနဲ့တကယ့်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်..
အဓိက မင်းသား(၂)လက်ဖြစ်တဲ့ Samuel L. Jackson ကြီးနဲ့ Kevin Spacey တို့ပါဝင်လေတော့အထူးကိုပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး..ကိုင်းမှုခင်း ၊အက်ရှင်ကားကောင်းတွေကြိုက်တဲ့သူတွေအဖို့ လက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါးပါရစေ…